[28 / 02 / 2020] Bursa Kent Meydanı Terminal Tramvay Hattı İhalesi Krediye Bağlı	16 Bursa
Maalinta: Ogast 26, 2017
Mashruucu wuxuu ku soo laabanayaa tareenka badan
Marka la eego baaxadda wax soosaarka Konak Tramway, marin kale oo muhiim ah ayaa la dhaafay. Dayactirka buundada weyn ee dul marta wabiga Meles ee wadada Martyrs Street ayaa timid marxaladdii ugu dambeysay. Dib ayaa loo dhigay oo dib loo dhisay nabadgelyo dhisida awgeed [More ...]
Maareeyaha guud ee IETT Arif Emecen iyo kooxdiisu waxay booqdeen degmada Sancaktepe waxayna la kulmeen duqa magaalada İsmail Erdem. Intii lagu gudajiray booqashada dhismihii Dowlada Hoose ee Sancaktepe, Agaasimaha Guud ee IETT Arif Emecen [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri, oo ka dhigaysa gubashada gaadiidka sida goob kasta, waxay saxiixday dib u habeyn kale. Town iyo gobolka sii waday in ay innovate on hal-abuurnimo ku Kayseri degmada Metropolitan ee Turkey [More ...]
Liistada murashaxiinta Injineerka ee u dalban doona Mashruuca Tareenka Qaranka oo ka qeybqaadan doona imtixaanka qoraalka ah ayaa hoosta lagu bixiyay. Imtixaanka waxaa lagu qaban doonaa Kuliyadda Injineerka si loo go'aamiyo xarunta waxbarashada joogtada ah ee Eskiziehir Osmangazi. Dokumentiga gelitaanka imtixaanka [More ...]
Tareenka Akhisar wuxuu u qaybsan yahay laba
Xubin ka tirsan baarlamaanka AK Party ahna gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee Manisa Uur Aydemir TCDD 3. Agaasime Goboleed ee daraasadaha barakaca tareenka ee ka baxsan magaalada ayaa baaray. Wadada tareenka cusub, oo ah halka wadooyinka imtixaanka lagu dhammeeyo, waa qiyaastii 7.2 [More ...]
CHP Gök, Ankara YHT Gari 's saqafka qarxay ayaa soo afjaray ajandaha Golaha
Guddoomiye ku-xigeenka kooxda CHP, Gok, Golaha Qaranka ee Grand dabaqa koowaad ee saqafka dabaqa koowaad ee agabka lakabka, 12 Agoosto Sabti oo ah meel madhan oo ka tirsan Golaha Qaranka Grand Him wuxuu siiyay su’aal. Gaadiidka, Badda iyo [More ...]
Gaadiidka Madaxwaynaha ee Kayserispor
Duqa magaalada Mustafa Celik, Kayserispor ayaa khudbadiisa ku sheegay intii uu booqashada ku jiray xarumaha kooxda ay uga mahad celiyeen taageerayaasha. Duqa Magaalada Celik, Kayserispor-Osmanlispor ciyaarta waxaa lagu ciyaari doonaa 21.45'te laba saacadood oo nidaamka tareenka caadiga ah maxaa yeelay [More ...]
Maanta taariikhda: 26 August August 1922 Yavuz Sultan Selim Bridge Madaxweyne